Sinopec IVinyl acetate Monomer, Polyvinyl Utywala, imethyl acetate - Haitung
Iingubo kunye nepeyinti
ABOUT HAITUNG shem
Strategic Partner of SINOPEC iimveliso acetate IVinyl
iimveliso eziphambili ziquka: IVinyl acetate Monomer (vam), Polyvinyl Alcohol (PVA), VAE emulsion kunye PVA nefayibha ect.
Sigxile kwi Petrochemicals ephezulu umgangatho
Siye ingqalelo uphando kunye nophuhliso kunye nokusasaza zemichiza iphezulu umgangatho kunye petrochemicals.
Strategic Partner of SINOPEC expecially yeemveliso IVinyl acetate.
Umthengisi kobungcali IVinyl acetate Monomer (vam), Polyvinyl Alcohol (PVA), EVA emulsion kunye Iimveliso PVA nefayibha.
Vumela Sinopec ubuchule olomeleleyo, oluzinzileyo ukunika imveliso kumazwe angaphezu kwama-60 thina.
Ephakeme MODULUS Ophezulu ...
Coatings & Iipeyinti
Ifowuni: +86 536 2746720
Imfuno ye-VAM yase-US iyaqhubeka ukuthambeka kwinqanaba lokuthumela ngaphandle, i-invento ...
I-US vinyl acetate monomer (VAM) yentengiso yokuthumela ngaphandle iyaqhubeka nokujongana nemfuno ebuthathaka kunye nezinto ezikhoyo, ukongeza uxinzelelo kwiinyanga zehlobo. Ngokwesiqhelo, ibango lonyaka linokuphakama kwe-Q2 kulwakhiwo ...
Iikhemikhali zijongane nokufuna ukothuka okufanayo no-2008 njenge-coronavirus go ...
Njengoko i-coronavirus isiya kwihlabathi liphela, iimakethi zeekhemikhali zinokulindela ukothuka kwemfuno okufana nengxaki yemali ka-2008, ngethemba lokudodobala kwemali kwisiqingatha sokuqala sika-2020 esiya sisanda ngokwanda. EYurophu, nangona kunjalo ...
Ukuqhambuka kwesixokelelwano sonikezelo lwe-coronavirus kuya kusiba mandundu
Ukuphazamiseka kwetyathanga lonikezelo olusuka kwi-clampdowns ekusasazeni kwe-coronavirus kuya kubangela iintloko eziphambili kubavelisi bemichiza kwiintsuku nakwiiveki ezizayo. Iindaba zeendaba zosasazo lokuvalwa okungapheliyo komnye ...